सपोर्ट माईक्रोफाइनान्सको साधारण सभा, अरु कुन कम्पनीको हुदै छ साधारण सभा जान्नुहोस
April 12, 2018 Aagan Post0Comments
चैत २९ , काठमाडौं । सपोर्ट माईक्रोफाइनान्स वित्तीय संस्था लिमिटेडको तेस्रो वार्षिक साधारण सभा आज बिहीवार दुर्गा पार्टी प्यालेस, इटहरीमा बिहान ११ बजे हुदैछ । सभाले संस्थाको विद्यमान ठेगाना परिवर्तन, कार्यक्षेत्र विस्तार लगायत वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन पारित गर्ने कार्यक्रम रहेको छ ।
सभाले संस्थाको विद्यमान ठेगाना इटहरी-२६ लाई परिवर्तन गरी इटहरी-१ बनाउनेछ भने हालको कार्यक्षेत्र १० जिल्लाबाट विस्तार गरी १९ जिल्ला कायम गर्ने प्रस्ताव पारित गर्नेछ । सोहि सभाले चालू आवको लागि लेखा परीक्षकको नियुक्ती र सञ्चालक समितिमा सर्वसाधारण समूहबाट प्रतिनिधित्व रहनेगरी २ जना सञ्चालकको निर्वाचन गर्ने कार्यक्रम पनि रहेको छ ।
साधारण सभा प्रयोजनका लागि कम्पनीले चैत १६ गतेदेखि बुक क्लोज गरेकाले चैत १५ गतेसम्म कायम सदस्यहरु सभामा भाग लिन पाउने माइक्रो फाइनान्सले जनाएको छ ।
साधारण सभा गर्ने कम्पनि हरु पनि जान्नुहोस
महालक्ष्मी विकास बैंक (MLBL) ले आगामी बैशाख २१ गते शुक्रबार अल इन वन मार्ट, क्राउन ब्यनक्वेट, मिनभवन, काठमाडौँ मा बिहानको १० बजे बार्षिक साधारणसभा बोलाएको छ ।
महालक्ष्मी विकास बैंक (MLBL) ले १६ औं वार्षिक साधारण सभा आह्वान गरेको हो । सभाले गत आर्थिक बर्षको नाफाबाट प्रस्तावित ९ प्रतिशत नगद लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव पारित गर्नेछ । बैंकले ९ प्रतिशत बराबरको २३ करोड ७० लाख ४१ हजार ७ सय ७० रुपैयाँ नगद लाभांश वितरण प्रस्ताव साधारण सभा बट पारित गर्ने बैंकले जनाएको छ ।
बैंक ले कुनै पनि बैंक तथा बित्तिय संस्था एक आपसमा प्राप्ति / गाभ्ने वा गाभिने अन्य आवस्यक कार्यहरुको लागि संचालक समितिलाई अख्तियारी दिने प्रस्ताब समेत पारित गर्ने भएको छ ।
सोहि सभाले संस्थापक शेयर धनि समूह को तर्फबाट ३ र सर्बसाधारण शेयरधनी समूह बाट ३ जना संचालकको निर्वाचन गर्ने कार्यक्रम पनि रहेको बैंकले जनाएको छ ।
त्यस्तै बैंक ले आव २०७३ /०७४ को वार्षिक प्रतिवेदन र सोही वर्षको नाफा, नोक्सान प्रतिवेदन पारित गर्ने प्रस्ताब पनि रहेको छ ।
साधारण सभाका लागि बैसाख ७ गते देखि २०७५/०१/२१ सेयरधनी किताब बन्द गर्ने भएकाले २०७५/०१/०६ गतेसम्म कायम सेयरधनीले मात्र सभामा भाग लिन तथा नगद लाभांश पाउनेछन् ।
बैंक को अघिल्लो जानकारी पनि पढ्नुहोस
महालक्ष्मी विकास बैंक (MLBL) ले आर्थिक वर्ष २०७३/७४ को नाफाबाट सेयरधनीलाई ९ % को दरले नगद लाभांस वितरण गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकले स्वीकृति दिएको हो ।
महालक्ष्मी विकास बैंकको मिति २०७४/०९/२८ गते बसेको संचालक समितिको बैठकले आफ्नो शेयर धनीलाई आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ मुनाफाबाट ९ % को दरले नगद लाभांस पारित गरेको थियो । उक्त नगद लाभांस साधारण सभाको स्वीकृति पश्चात लगानीकर्ताले पाउने छन् ।
महालक्ष्मी विकास बैंकले चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासमा ५ करोड ६३ लाख ४३ हजार रुपैयाँ खुद नाफा कमाएको छ भने चुक्ता पुँजी २ अर्ब ६३ करोड ३७ लाख ९७ हजार रुपैयाँ रहेको छ ।
७१ शाखा सञ्जाल तथा ३५ एटिएमबाट ग्राहकलाई वित्तीय सेवा प्रदान गर्दे आईरहेको राष्ट्रिय स्तरको विकास बैंक हो ।
← कारोबारको अन्त्यतिर शेयर बजारमा हरियाली, लगानीकर्ता पर्ख र हेरको अवस्थामा
जोशी हाइड्रोपावर र शुभम पावर कम्पनीले साधारण शेयर (IPO) निष्कासन गर्ने →
फ़ाइनान्स को ३,६२,१९० कित्ता हकप्रद को मिति तय, कहाँबाट आवेदन दिने ?
कारोबारको अन्त्यतिर शेयर बजारमा हरियाली, लगानीकर्ता पर्ख र हेरको अवस्थामा
अर्थमन्त्री खतिवडाले पुँजी बजारको विकासका लागि के भने ? हेर्नुहोस..
March 30, 2018 Aagan Post 0